Wararka Maanta: Khamiis, Jan 31, 2013-Shacabka Somaliland oo u qaadan la' Amni-daradda ay Dowladda Ingiriisku ku sheegtay inay ka jirto Somailand
Magaalooyinka waaweyn ee Somaliland ayaa shacab ka cadhaysan hadalkaasi Ingiriiska ka soo yeedhay maalmihii u dambeeyey ka dhigayey mudaharaaddo ay ku diidan yihiin arrintaasi, waxaanay caalamka u sheegayeen in dalka ay nabadgalyo buuxdaa ka jirto, isla markaaana aanay ahayn meel nabadgalyo daro lagu tilmaami karo.
Dadweynahan ayaa sitay boodhadh waaweyn oo ay ku xardhan yihiin fariin ay u dirayaan dawladda Ingiriiska oo ah in nabadgalyada Somaliland ay ku jirto gacanta shacabka iyo ciidanka amniga oo wada jira, hadalkaasina uu ahaa mid uu ku gefay, sidaa darteed uu sida ugu dhakhsiyaha badan uga noqdo dhowaqaas.
Isku soo baxan ayaa waxa uu ka dhacay magaaladda Hargeysa, Berbera, Balligubadle, Caynaba iyo Gabiley, halka maalmaha soo socdana magaalooyin kale ka dhici donaan, waxaany inta badan dadku si iskood ah isku soo abaabulayaan mudaharaadyadan, iyagoo si qiiro iyo wadaniyad ku jirto ugu dhowaaqayo erayo ay ku dhalliilayaan dawladda Ingiriiska oo ay kaga codsanayaan inuu go’aankaasi ka noqdo.
Dadweynahan ayaa ku kala duwan arrintan, waxaanay dadka qaar ku sheegayaan in aanay waxba ka jirin ee uu danno siyaasadeed iyo dhibaateen ka leeyahay ingiriska, halka qaar kalana ku sheegayaan in wax jira tahay oo aanay wax aan jirin dawlad wayni iskaga dhowaaqdeen, sidaa darteed loo baahan yahay in amniga la adkeeyo.
“Ingiriisku arrintan uu u jeeddo ilaa hadda ma fahmin waxa uu uga jeedo, laakiin waxaan u arkaa nolol u quudhi waa uu ka xun yahay in Somaliland nabadgalyo iyo horumar ka jirto, isla markaana uu doonayo inuu ka taliyo arriaha somaliland taas aanay suurtogaleen”ayuuu yidhi mid ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaaladda Hargeysa.
Mukhtaar Maxamed ayaa isna ku dooday in faa’iido ku jirto ka bixitaanka u Ingiriisku ka baxayo Somaliland oo hay’adan dalka joogaan waxba dalka u qaban ee ay lugoynayaan “Horta anigu faa’iiddo ayaan u arkaa ingiriiskan dalka ka baxaya, haddii ay hay’ada ajanabiga ah ee dalka joogaa ka baxaan waxaynu noqonayna dad isku filan, waxaana laga maarmayaa in hay’ad uun wax ka sugno, dadkii u shaqaynayeyna waxay maalgashanayaan dalka oo waxay ka baxayaan inay cid u shaqeeyaan oo iyagaa ganacsi samaysanaya marka faa’iido badan ayaa ka soo baxay bixitaanka hay’adaha ajanabiga ah”
“Anigu waxaan aaminsanahay in aanu Ingiriisku iska hadal ee ay wax jiraan, dareen uu arkayna uu uga digay shacabkiisa, maadaama oo masuul ka yahay ummaddiisa si aanay dhibaato usoo gaadhin, marka looma baahna buuq iyo rabash ee waa in aad ficil u badasho oo aad amnigaaga sugto kana hortagtaa waxa uu ingiriisku sheegay”ayuu yidhi Mawliid Maxamed oo aragtisiisa cabirayey.
Si kastaba ha ahaatee, dadweynahan ayaa aad uga cadhooday hadalkaasi, waxaanay qaarkood xukuumadda ku dhaliilayaan in si jilicsan uga jawaabtay arrintaasi, balse ay ahayd in si adag ula hadlaan dawladda ingiriiska maadaama oo nabadgalyaddii ay Somaliland ku faani jirtay wax u dhimay.